Sawir Murugo leh oo laga qaaday Hooya Hindiya ku nool oo ag fadhida meydka wiilkeeda oo 29 jir ah oo u dhintay Covid 19 | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Sawir Murugo leh oo laga qaaday Hooya Hindiya ku nool oo...
Sawir Murugo leh oo laga qaaday Hooya Hindiya ku nool oo ag fadhida meydka wiilkeeda oo 29 jir ah oo u dhintay Covid 19
Sawir qalbiga taabanaya oo laga qaaday Hooya Hindiya ku nool oo agfadhida meydka wiilkeeda oo 29 jir ah oo u dhintay fayraska Korona ayaa hadalhayn weyn ka abuuray dalkaasi.
Sawirka ayaa muujinyaa Hooyo Chandrakala Singh, oo aad u daallan oo dhagax ku fadhida uuna horyaalla meydka wiilkeeda Vineet Singh, sawirka oo laga qaaday wadda ciriiri ah oo ka mid ah waddooyinka magaalada Varanasai oo ka tirsan gobolka Uttar Paradesh oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi.
Sawirkan naxdinta leh ayaa tusaale ka bixinaya saameynta uu cudurka safmarka ah uu u geystay Hindiya iyo sida uu cudurka uga itaal roonaaday adeegga caafimaadka dalkaasi.
Dalka Hindiya ayaa ka mid ah dalalka uu sida weyn uu u saameeyey mowjadda labaad ee Covid-19. Gobolka Varanasi, oo ah gobolka laga soo doorto Ra’isal wasaare Narendra Modi ayaa ka mid ah gobollada sida weyn ula daalaa dhacaya cudurka.
“Vineet kalliyaha ayaa ka xanuunsanaa wuxuuna ku xirnaa dhakhtar ka shaqeeyo isbitaalka BHU, Isniintii ayuuna la ballansanaa dhakhtarka” ayuu yiri Singh adeerkii.
Balse Hooyada iyo wiilkeeda xanuunsan isbitaalki ay ballanta ku lahaayeen markay gaareen waxaa loo sheegay inuu dhakhtarka joogin waxaana lagula taliyey iney tagaan xaruunta lagu hayo dadka ay xaaladdooda culustahay.
Hase yeeshee ,Vineet wuxuu ku dhacay albaabka laga galo xaruunta dadka xaaladaha degdegga ah ku jira, maadaamaa ay shaqaalaha isbitaalka diideen iney wiilkeeda qaabilaan, ayey tiri hooyadii.
“Waxay igu yirahdeen waxaa ku dhacay korona ee naga qaado. Wiilkeygana waxaa dhibayey naqaska. Waxaan shaqaalaha caafimaadka ka baryay iney wiilkeyga Oxygen ku xiraan,” ayey tiri iyada ooyeysa.
Haddana waxay u sii qaadday isbitaal gaar loo leeyahay oo ku dhawaa iyada oo bajaaj ku sii qaadday, balse nasiib darrro iyagiina wey diideen iney qaabilaan.
Vineet isbitaal seddexdaad inta loo sii wado ayuu geeriyooday dhabta hooyadii isaga oo ku jiifa.
Xilli ay hooyadaasi aad uga murugeysan tahay geerida wiilkeeda oo ay gargaar u baahan tahay, ayey tuugo ka xadday diiwaankii caafimaad ee wiilkeeda, lacagti ay wadatay iyo taleefanki gacanta intaba.
Sawirka hooyada ayaa marki ugu horreysay lagu daabacay wargeyska maxalliga ah ee Dainik Jagran, kaddibna sawirka ayaa ku baahay dalka Hindiya oo dhan.
Shravan Bharadwaj oo ah wariyaha tabiyey warbixinya hooyada uu wiilkeeda Covid-19 uga geriyooday oo BBC u warramay wuxuu sheegay Vineet inuu ku dhintay bannaanka kore ee isbitaalka BHU iyo aag ay ku yaalliin in kabadan toban hoospitaal oo gaar loo leeyahay.
“Balse cid bukaanka geeriyooday gargaar u fidisay malahan,” ayuu yiri.
Weli waxaan la caddeyn Vineet inuu u dhintay Covid-19 ama wax kale inkasta oo ay qoyskiisa sheegeen “iney ku arkin wax astaan ah oo cudurka korona la xiriira”.
“Haddii Vineet la siin lahaa daryeel oo lagu caawin lahaa qalabka neefsiga lagana daweyn lahaa kalliya xanuunka naftiisa waa la badbaadin kari lahaa. Balse wuxuu u dhintay dayacaad. Dayacaadda noocan oo kale ahna waxaa u dhiman doono dad aad u badan,” ayuu yiri adeerkii.
Dhacdooyin noocan ah ayaa ka dhaca dalka Hindiya oo dhan maadaamaa uu cudurka safmarka ee corona uu fara ba’an dalkaasi ku hayo isbitaalladana ay la ciirciirayaan. Dad badan oo Vineet la mid ahna waxay ku dhintaan isbitaalka bannaankiisa ama iyaga oo isbitaalka ku sii socda.
Baraha bulshadana waxaa qabsada qayladhaan la xiriirta baahida loo qabo qalabka neefsiga ama Oxygen, qalbka caawiyo bukaannada xaaladaha aadka u liita ku jira (ICU), sariira bukaannada la jiifiyo iyo dawooyinka bukaannada lagu badbaadiyo maadaamaa mowjadda labaad ee cudurka uu dalkaasi si weyn u saameeyey.
Mas’uul ka tirsan isbitaalka oo BBC u warramay wuxuu sheegay cudurka safmarka ah maadaamaa ay xaaladdiisu faraha ka sii baxeyso iney bixiyaan oo keli adeegga la talinta oo qaab online ah.
Dr Sharad Mathur, oo dhakhaatiirta isbitaalka ka howlgasha ka mid ah wuxuu sheegay iney dadaalayaan balse, ‘culeyska uu aad u badan yahay’,
“Shaqaalaha ayaa aad u yar, shaqaalihi isbitaalka oo dhanna waa la howl geliyey. maalin walbana waxaan badbaadinnaa dad aad u badan. Balse dadku waxay isbitaalladu yimaaddaan oo keli ah marka ay bukaanka xaaladdiisu gaarto halki ugu xumeyd. Arrimahan oo dhan waxay dhacayaan iyada bartanka looga jiro mowjadda labaad ee cudurka safmarka” ayuu yiri.
“Dhammaan bukaannada aan qaabilno waa kuwa ay xaaladdooda culustahay. Balse annagu ma awoodno inaan bukaannada oo dhan badbaadinno,” ayuu yiri.
Previous articleGolaha Ammaanka oo baaq kale oo deg deg ah ka soo saaray xaalada Somaliya kuna baaqay Wada hadal Cusub
Next articleGuddoomiyaha Gobolka Mudug dhanka Puntland oo ka warbixiyay howlgallada ka socda Magaalada Gaalkacyo dhinaca Puntland
Madaxweynihii hore ee Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa nasiib darro ku tilmaamay in ka badan 35 milyan dollar oo Talyaaniga, Sweden, Midowga Yurub iyo...
War deg deg ah: Madaxweynaha Waqtigiisa dhamaaday gaaray xarunta Golaha shacabka..
Saraakiil ka tirsan booliska Kenya oo sheegaya in ay ku raadjoogaan...
Madaxweynaha Dowlada Jubaland Axmed Madoobe oo kulan la qaatay Gudoomiyaha Aqalka...
Ciidamada Haramcad oo Gadood sameeyey Maanta
Abiy Axmed oo ka codsaday Afrika inay ku taageeraan howlgallada sharciga...
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya oo kula kulmay dhiggiisa waddanka...
Madasha Badbaado Qaran oo war ka soo saaray Damaca Farmaajo ee...
Mahdi Guuleed “Muranka badda waxaa dhameystiri doona ICJ kadib dhageysigii. Waxaan...
Mohamed Abdullahi Mohamed - May 7, 2021 0